भलिबल क्लब च्याम्पियनसिप : त्रिभुवन आर्मी विजयी |
नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले पाँचौँ संस्करणको आरबीबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा विजयी शुरुआत गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखप) को कभर्ड हलमा केहीबेर अघि सम्पन्न पुरुष भलिबलमा आर्मीले आरजे भलिबल ग्रुपलाई ३–० सेटले पराजित गरेको हो । आर्मीले आरजे ग्रुपलाई २५–९, २५–१६ र २५–९ अङ्कले हरायो । जितसँगै आर्मीले दुई अङ्क जोडेको छ । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ११ तथा महिलातर्फ सात टोलीको सहभागिता छ । पुरुषतर्फ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब र रारा बुलबुले क्लबबीच खेल भइरहेको छ ।
महिलातर्फ आजै होङ्गवाञ्जी न्यू डायमण्ड क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जीतेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए । पुरुष भलिबलमा सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । चारै समूहको शीर्ष दुई टोली क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । पुरुषतर्फको समूह ‘ए’ मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, आरजे भलिबल ग्रुप र नयाँ बजार सामाजिक क्लब, समूह ‘बी’ मा एपीएफ, बुलबुले रारा क्लब र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र, समूह ‘सी’मा नेपाल पुलिस क्लब, मणिमुकुन्द भलिबल क्लब र पार्वती भलिबल क्लब तथा समूह ‘डी’ मा हेल्प नेपाल स्पोर्टस् क्लब र बुद्धटोल युवा भलिबल क्लब छन् ।
नेपाल–जापान भलिबल सङ्घका अध्यक्ष नवीन गुरुङले पाँचौँ आरबीबी एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिपअन्तर्गत पुरुषतर्फको प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गरेको छ । गुरुङले पुरुषतर्फको पहिलो पुरस्कार रु दुई लाख नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जीतेन्द्रबहादुर चन्दलाई आज हस्तान्तरण गरे । उनले जापानमा रहेर लामो समयदेखि नेपालको भलिबलमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । गुरुङ जस्तै विदेशमा रहेका केही भलिबल प्रेमीले सहयोग गर्दैआएको महासचिव चन्दले बताए ।
१. आविष्कार केन्द्रलाई जेम्सको आर्थिक सहयोग
२. अन्नपूर्ण आधार शिविरमा चहलपहल बढ्दै
३. नागढुंगाबाट खैरो हेरोइनसहित युवती पक्राउ
४. शेर्पा समुदाय ग्याल्पो ल्होसार मनाइँदै
५. सिन्धुपाल्चोकमा हराएको मूर्ति फेला
६. रोशीका उपाध्यक्षको न्यायिक काम, आफ्नो सुविधाले दुई एम्बुलेन्स खरिद